यु'द्धको संकेत ! अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा इरानले हा'न्यो दर्जन रकेट - Sidha News
यु’द्धको संकेत ! अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा इरानले हा’न्यो दर्जन रकेट
एजेन्सी। इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा रकेट आ क्र मण गरेको छ । इरानी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले दिएको खबरअनुसार पश्चिमी इराकको इन् अल आसादस्थित अमेरिकी गठबन्धन सेनाको बेस क्याम्पमा बुधबार बिहान दर्जन रकेट प्र’हार गरिएको हो।
१३ रकेट प्रहार गरिएको र हालसम्म कुनै क्षति तथा ह’ताह’तीको विवरण प्राप्त नभएको बग्दादका संवाददातालाई उद्धृत गर्दै अलजजिरा जनाएको छ। इरानी सरकारी टेलिभिजनले पनि रिभ्युलुसनरी गार्डले रकेट प्र’हार गरेको र अमेरिकाले थप आ क्र मण गरेमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चे’तावनी दिएको छ।
गत साता अमेरिकी आ क्रम णमा इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानी मा रिएपछि इरानले बदला लिने ध’म्की दिँदै आएको थियो।